Deg Deg: Cali Gurey Oo Beel-Weynta Habar Yoonis Iyo Xisbiga Waddani Kabaha La Dul-Maray "Hadhow Bay Odhan Calaa Geel Laayay" - Wargane News
Home Somali News Deg Deg: Cali Gurey Oo Beel-Weynta Habar Yoonis Iyo Xisbiga Waddani Kabaha...
Deg Deg: Cali Gurey Oo Beel-Weynta Habar Yoonis Iyo Xisbiga Waddani Kabaha La Dul-Maray “Hadhow Bay Odhan Calaa Geel Laayay”
Cali Guray oo ka Hilaacay Kulmiye “KULMIYE waxaa Isugu Kaaya Dembeysay Toddoba Sanno Ka Hor Annagoo Is Bedel Doon Ah...”
Mujaahid Cali Maxamed Yuusuf Cali Gurey Oo Si Adag U Weeraray Madaxda Beel-Weynta Habar Yoonis Iyo Xisbiga Mucaarid Ka Ah Ee Waddami
HADHOW BAY ODHAN CALAA GEEL LAAYAY
Caligurey wixii run ah raaligelin kama bixiyo. Hadaad been ka soo hesho inta uu sheegayse diyaar buu u yahay inu raaligelin ka bixiyo. Wuxu ka hadlay goobjoog yaa u ahaa oo beeninaya? Aan kuu jilciyo halkaa kaga hadh baan lahaaye hadii wax aanad ogayn kii ogaa adiga ku yidhi ka hadal.
Ilaa 1983kii oo aan aqaanay Axmed Mire taariikhda markii iigu horeysay een arko isagoo la socda Muuse Biixi iyo Ibraahim Dhegawayne oo labduba ahaa kuwii uu Xarshin ku xidhay shirqoolka 1dii Feebarweri 1988kii waxa iigu horeysay 1997kii markii Ina Cigaal oo doonayay inu Wasiirka Gaashaandhiga Abaal marin u siiyo lagu yidhi “ha nooga dhigin ma doonayno eh” ee lacagta loogu bedelay sida la yidhi (200000$).
Isaga oo dhincana Muuse ka socdo dhinaca kalena Ibraahim ka socdo ayaan kula kulmay Baar Hargeysa iyagoo xaga suuqa ka yimi oo lugaynaya aniguna aan xaga shacabka ka imi oon lugaynayo. Intii aanan soo gaadhin ayaan qosol dheer ku dhuftay. Axmed markiiba wuu fahmay waxan ku qoslayay. Intuu hore uga soo baxay uu gacanta i qabtay oo dhinac iila leexday ayuu yidhi “ ma waxad ku qoslaysaa wada socodkayaga? Waxan ugu jawaabay haa waa goorma shalay idiin ekayde. Intuu qoslay ayuu yidhi hadana waxa iskaaya raaciyay ma kuu sheegaa? Waa FAILOR-KA.
Adeer ma may jirin baad odhan? Inay jirtay baa walaahi ah oo bilaahi ah oo tolaahi ah. Markaa wuxu degenaa idaacadda hoosteeda eh oo Muuse gaadh kaga hayaye maxaa ku kelifay? Boqol sheeko oo wada run ah oo aan qof beeninayaa jirin baan sheegi karaaye ma xaal baa igu qabanaya? In wasiirka Gaashaandhigga loo waday iyo halkuu lacagta ku tirsaday midna ma cadayn karo laakiin kuwii iiga sii xogogaalsanaa ayaa ii sheegay. Kuma dhaaran karo. Markaa ku yar oo u hiili is leh baad kolay tahaye ha ka hiilinin Mujaahidka
Ta shirkaan kuugu daray anigu shir dhaqan oo garxajis umaan arkin wuxuse uga dhawaa shir siyaasadeed markaa malaha in Waddani badheedho oo shir waddani noqdo ayaa ka fiicnayn. Qaraarka ka soo baxay ee muhuumka ahaa wuxu ahaa uma baahnin codka Habarawal iyo Habarjeclo. Dabcan cid ku qasbaysaana ma jirto. Laakiin Kulmiye garxajis daaye Muuse Cabdalle uga tegi maayo waddani ee inu la qaybsado ayuu Ku dadaali kuna qadi maayo. Cidda laba reer oo dhan iyadu tidhi waa jeegaan oo waan ka maarmay halkaasi siyaasi ma joogin. Bal ka warama kuwa iyagu ka soo jeeda reeraha Waddani ka maarmay ee WADDANI ah. Kuwaa qaar ka liitaa ma jiraan
Deg Deg: Faysal Cali Waraabe Oo Imika Warbaahinta La Hadlay Kana Hadlay Arrimo Xasaasi Ah Iyo Xaalada Dalka + Muuqaal
Somaliland: Cali Gurey Muxu Ka Yidhi Uurur Diimeedka Cusub Ee Saacidun Bil Xaq?